४६ जना सवार रहेको बस काठमाडौँबाट चितवन तिर जाँदै गर्दा रुखमा ठोक्किएर पल्टियो ! - Nepal Insider
Home/समाचार/४६ जना सवार रहेको बस काठमाडौँबाट चितवन तिर जाँदै गर्दा रुखमा ठोक्किएर पल्टियो !
४६ जना सवार रहेको बस काठमाडौँबाट चितवन तिर जाँदै गर्दा रुखमा ठोक्किएर पल्टियो !
यो पनि पढ्नुहोस : रु दुई करोड ५० लाखको खसीबोका बिक्री
नवलपरासी पूर्वनवलपुरमा रहेका दुईवटा सहकारीले मात्रै बडादशैँमा रु दुई करोड ५० लाख बराबरको खसीबोका बिक्री गरेका छन् । गएको दश दिनको अवधिमा सहकारीले स्थापना गरेको सङ्कलन केन्द्रबाट सो मूल्य बराबरका खसीबोका बिक्री भएको हो । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको झ्यालबासस्थित लेकबँेसी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले दशैँमा मात्रै रु दुई करोड ३० लाखको मूल्य बराबरको खसीबोका बिक्री गरेको छ । सहकारीले स्थापना गरेको सङ्कलन केन्द्रमा किसानबाट सङ्कलित खसीबोका बिक्री गरिएको थियो ।
बडादशैँ शुरु भएपछि नवमीसम्ममा एक हजार ७६३ वटा खसीबोका बिक्री गरेको सहकारीका व्यवस्थापक सुशीला परियारले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रका किसानबाट सङ्कलित खसीबोका बिक्री गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्कलन भएका खसी बोका स्थानीय बजारसँगै चितवन, पोखरा र काठमाडौँका व्यापारीले खरीद गरेको व्यवस्थापक परियारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै खसीबोका चितवन निर्यात भएको छ । त्यसपछि पोखरा, काठमाडाँै र स्थानीय बजारमा खपत भएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले सामान्य मुनाफा राखेर विगत पाँच वर्षदेखि कृषकबाट सङ्कलित खसीबोका बिक्री गर्दै आएको छ । यसले कृषकले उत्पादन गरेका खसीबोकाले सहजरुपमा बजार प्राप्त गरेका छन् भने मूल्यमा ठगिनबाट जोगिएका छन् ।
समुद्री छालको झल्को दिने गरि फेवातालमा आयो डरलाग्दो छाल, ५० बढी डुंगा डुबे
महराले फिर्ता गरे सरकारी सुविधा
खसी-बोकामा आत्मनिर्भर नेपाल ! यो दसैंमा भारतीय खसी-बोका नभित्रिने, स्वदेशीले नै माग धान्ने